Hees Baashaal Ah Farxiyo Kabayare Iyo Dalmar Yare - Daawo Fikirkaagana Ka Dhiibo - iftineducation.com
Hees Baashaal Ah Farxiyo Kabayare Iyo Dalmar Yare – Daawo Fikirkaagana Ka Dhiibo
aadan21 / February 4, 2012
farxiyo kabayare iyo dalmar yare
iftineducation.com –Fanaaniinta Somaliyed ee qurbaha jooga ayaa tan iyo dhamaadkii sanadkii tagay u muuqda in ay u istaageen sidii ay u soo casriyeeyn laaheen muuqaalada heesaha ay soo qaadayaan taasi oo dadka heesaha xiisaya ay si weyn ula dhaceen .
King Khalid iyo Ikraan Caraale ayaa dhamaadkii sanadkii hore soo qaaday hees muuqaalka loo sameeyay ka duwaneyd hababkii Somalida lagu yaqiinay,waxaa soo xigay xuseen caarb iyo faiza xasan, waxaa ku soo xigay oo sanadkaa 2012-ka hees iyana action qatar ah la giliyay soo saaray Cabdi Baadil Iyo Laki Xaaji Waceys.
Haatan ayaa iyana hees iyana action- kala duwan leh soo saaray fanaaniinta da`da yar ee Farxiyo Kaba Yare Iyo Dalmar Yare.
Hadaba aqriste ama daawade u codee afartaas hees ee muuqalada action-ada kala la soos aaray sidee ukala mudan yihiin waa inoo muhiim fikirkaada .
Ikraan Iyo King Khalid
King Khalid Iyo Ikraan Caraale
Xuseen Carab Iyo Fa`iza Xasan
Laki Xaaji Iyo Cabdi Baadil
Farxiya Kaba Yare Iyo Dalmar Yare
Halkan Kadawo Video-ga
Shahid Kapoor oo Shaqo La’aan Soo Wajahday Kadib….
Aktarada Kareena Kapoor oo Uur Qarsoodi ah qaaday?